AMP-Plugin mit IFrame Unterstützung - IG
Ihe ngwangwa nke Accelerated Mobile Pages (AMP) maka imepụta peeji Google AMP , ihe mgbakwunye AMP na ihe ntinye akara AMPHflix na- enwe ntụgharị akpaghị aka nke iframes n'ime mkpado <amp-iframe>.
The Accelerated Mobile Pages Generator na-akpaghị aka na-achọpụta ma ọ bụrụ na etinyere iframe na ibe gị ma gbanwee ihe ọ bụla ọ bụla ọ hụrụ na mkpado <amp-iframe>.
AMPHflix ugbu a na-enye ohere itinye ọdịnaya nke nwere njikọ HTTPS ziri ezi!
Ihe ngwangwa nke Accelerated Mobile Generator na-enyocha ma URL ahụ ejiri na iframe nwekwara ike iru site na njikọ HTTPS ezoro ezo. Iji mee nke a, Generator Generator Accelerated na-agbanwe 'HTTP' maka 'HTTPS' na URL ahụ. Ọ bụrụ na enwere ike mepee URL ahụ na HTTPS, ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa na-agbanwe iframe n'ime mkpado 'amp-iframe' kwekọrọ ma mee ka iframe dị na mbipute AMPHflix.
Ọ bụrụ na enweghị ike ibudata URL na HTTPS, enweghị ike igosipụta ọdịnaya iframe ozugbo na mbipute AMPHflix. Na nke a, na Accelerated Mobile Peeji nke Generator na-egosiputa ndị na-esonụ placeholder graphic:
Site na ịpị eserese a, onye ọrụ nwere ike mepee ọdịnaya iframe site na 'njikọ HTTP' ezoro ezo. N'ụzọ nke a, enwere ike ịnweta ọdịnaya IFrame ma ọ dịkarịa ala site na ngwọta ọzọ ma elegharaghị ya anya kpamkpam.